गौरीशंकर फर्निसिङ्मा आगलागी, कारण र क्षतिको विवरण आउन बाँकी
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७५-०८-१० | ५८४ १६
काठमाडौंं । सोमबार मध्यान्न करीब ३ बजे सल्किन शुरु गरेको आगोले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १०, बुद्धनगर क्षेत्रमा पर्ने गौरीशंकर फर्निसिङ्का सामान जलेर नष्ट भएका छन् । आगो कसरी सल्कियो कारण थाहा हुन सकेको छैन । त्यसबेला फर्निसिङ्का सञ्चालक राम कार्की बाहिर गएका थिए । आगो सल्किन शुरु भएपछि उनलाई खबर गयो । हतारमा कतिबजे खवर आयो उनलाई एकिन छैन । करीव २ घण्टाको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा आयो । घटनामा मानवीय क्षति भएन भौतिक क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ ।
रामका भाइ सन्तोषराज कार्कीका अनुसार उनी बागबजारमा काममा भएका बेला आगो लागेको खवर गएको हो । त्यसपछि उनी लगत्तै फर्किए । त्यहाँ पुग्दा अवस्था अर्कै भइसकेको थियो । सामान भएका टहरा बाहिर दमकल र मान्छेको भीड थियो । उनका अनुसार टहराभित्र ३ जना कामदार काम गरिरहेका थिए । उनीहरुले टहराको पछाडिपट्टिबाट आगो सल्किएको जानकारी दिए । के कारण आगो सल्कियो थाहा छैन, तर पछाडिबाट आएको हो, उनीहरुको भनाइ छ ।
घटनास्थलमा भेटिएका रामका भाञ्जा देवराज खत्रीका अनुसार टहराभित्र दराज, सोफालगायत फर्निचरका सामान फिटिङ् गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यहाँ बाक्ला फमहरु भएका कारण आगो नियन्त्रण गर्न समय लागेको थियो । जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बद्रीमान नगरकोटीका अनुसार आगोको प्रकृति ठूलो भएको र दमकलमा पानीको परिमाण कम भएकोले आगो नियन्त्रण गर्न कठिन परेको हो । यो विषयमा भीडमा पनि गुनासो चल्दै थियो — एकछिन पानी हानेपछि दमकल रित्तो हुन्छ । आगो कहिले निभ्ला र?
घटनास्थलमा जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनबटै जिल्लाबाट दमकल लिएर अग्नि नियन्त्रक आएका थिए । यसका साथै नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी पनि उपकरणसहित खटिएका थिए । यसका साथै सडकमा गुडिरहेका पानीका ट््याङ्करलाई ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमा पठाएका थिए । आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । घटनास्थलमा पुगेको महानगरको वडा १० का अध्यक्ष राम के. सी. ले अनपेक्षित घटनाले दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । घटना सुन्नेवित्तिकै घटनास्थलमा आएँ । त्यसपछि कम क्षति होस् भनेर अग्नि नियन्त्रकसँग समन्वय गरेको वडाध्यक्ष के. सी. को भनाइ छ ।
जोखिम आँकलन र क्षति व्यवस्थापन गर्न समुदायको भूमिका बढी Previous Post
महिला शशक्तिकरण तालिम सम्पन्न Next Post